Misedra olana ny asa tanana : “Aondran’ny Sinoa koa ny rofia”, hoy Rtoa R.Sahondra | NewsMada
Misedra olana ny asa tanana : “Aondran’ny Sinoa koa ny rofia”, hoy Rtoa R.Sahondra
Mpanao asa tanana, mikirakira ny rofia Rtoa Ralivao Harinirina Sahondra.
Niroborobo ny fihariany tohanan’ny fandaharanasa Prosperer. Saingy anisan’ny olana ny ampihimamban’ny Sinoa, manondrana ny akora fototra rofia any Sina ihany koa. Dinidinika.
Taratra (*): Inona ny fiovana tsapanao taorian’ny tohana nataon’ny Prosperer?
Ralivao Harinirina Sahondra (-): Nisehatra tamin’ny taozavatra avy amin’ny rofia aho nanomboka ny taona 2000. Teo ho eo ihany ny asako, fa niova tanteraka nanomboka ny fiarahako tamin’ny fandaharanasa Prosperer ny taona 2010. Nahazo fiofanana tamin’ny famoronana karazana vokatra (modely), mikasika ny fitantanana sy ny fananana kolontsaina mpandraharaha. Ho an’ity farany, voakasik’izany ny fomba findramam-bola hanitarana ny ambaindain’ny fihariana. Teo koa ny fianarana tenim-pirenena, nahafahana mifanerasera sy mifampiraharaha amin’ny mpanjifa vahiny.
Ankehitriny, afaka nindram-bola aho, ary efa manondrana ny vokatra any Frantsa sy Maorisy ary Mayotte. Nitombo ny vokatra, satria efa mahavita poketra na harona manodidina ny 2.000 aho raha 20 eo ho eo tany aloha.
*Manao ahoana ny fikarohana akora fototra?
–Misedra olana tokoa izahay ankehitriny satria ataon’ny Sinoa ampihimamba aondrany any Sina koa ny akora fototra fampiasanay, rofia. Vokany, mihavitsy vao mahita azy sady midangana ny vidiny. Raha manodidina ny 800 Ar. ny kilao tany aloha, tafakatra 4.500 Ar izany amin’izao fotoana izao. Fanirianay mpanao asa tanana madinika malagasy ny hamoahan’ny fanjakana lalàna sy fepetra mandrara ny fanondranana ny akora fototra tsy voahodina toy ny rofia any ivelany intsony. Efa nitaraina mikasika azy io izahay, saingy tsy nisy valiny mahafa-po hatramin’izao.
Nangonin’i Njaka Andriantefiarinesy